Ny valdisma na valdeisma na Fiangonana ara-pilazantsara valdesa (italiana: Chiesa Evangelica Valdese) dia Fiangonana lehibe indrindra nipoitra avy tamin' ny toriteny nataon' i Pierre Valdo. Io no fiangonana prôtestanta italiana voalohany izay hita indrindra ao Italia sy any Amerika Atsimo. Mikambana ao amin' ny Fiombonan' ny fiangonana nohavaozina era-tany sy ny amin' ny Kônferansa prôtestanta any amin' ny firenena latina ao Eorôpa io fiangonana io.
Fanao sy fampianarany[hanova | hanova ny fango]
Fanao[hanova | hanova ny fango]
Tsy mitovy amin' ny Katôlika ny Valdesa izay tsy ahitana pretra: tsy ahitana afa-tsy "volom-bava", karazana pastora izay mitarika fankalazana rehefa avy nianatra lahatsoratra sy nanao fitsidihana an' ireo "volom-bava" tranainy mandritra ny telo taona. Ny Valdesa avy ao Bôhema dia nenjehin' ny Katôlika mafy nandritra ny Inkizisiona ka nahatonga ny sasany amin' izy ireo hanatevin-daharana ny Hosita.
Tamin' ny fotoan' ny fanavaozam-piangonana dia nandefa solontena roa tany Soisa ireo Valdesa ireo mba hahafantatra ny hevitry ny mpanavao fiangonana sahala amin' i Johannes Oekolampad sy i Guillaume Farel.
Tamin' ny voalohany dia tsy nisy afa-tsy ny sitrapo hiverina amin' ny fahantrana araka ny Evanjely. Taty aoriana dia nihanazava ny foto-pampianaran' ny Valdesa nandritra ny fivoriana tao Laus tamin' ny taona 1526 sy tao Chanforan tamin' ny taona 1532. Ny fototra dia ny fahalalana ny Filazantsara, avy amin' ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Valdisma&oldid=1010429"
Voaova farany tamin'ny 28 Martsa 2021 amin'ny 13:00 ity pejy ity.